uyelulama owe-netball ohlaselwe yi-corona - Ilanga News
Home Ezemidlalo uyelulama owe-netball ohlaselwe yi-corona
uyelulama owe-netball ohlaselwe yi-corona
UYELULAMA uMengameli we-Netball South Africa (NSA) uCecilia Molokwane ohlolwe emasontweni amabili edlule kwatholakala ukuthi une-coronavirus okuwumkhuhlane obhebhetheka mawala emhlabeni.
Kutholakale emasontweni amabili edlule ukuthi lesi sikhulu sine-coronavirus esibulale izinkulungwane zabantu emhlabeni.
Ngesikhathi ehlolwa wayalelwa ukuba azivalele angahlangani nabantu ukunqanda ukuba leli gciwane lingasabalali. Ubengakwazi ukuhlangana ngisho nomndeni wakhe kusatshelwa ukuthi kungenzeka awuthelele.
Izindaba zokululama kukaCecilia ziqinisekiswe iNSA ekhasini layo leFacebook.
Bathi uCecilia uhlolwe kanye nabo bonke abantu ake aba seduze nabo okuhlanganisa nezintatheli ezithile.
Lesi sikhulu kusolwa ukuthi sithole leli gciwane ngemuva kokuhambela e-United Kingdom lapho besihlangene nezinye izikhulu zemidlalo yeNetball kanti ubehambisana nesikhulu esiphezulu seNSA uBlanche de la Guerre nabanye.
“Ngemuva kokuba ngithole imiphumela yokuthi sengine-coronavirus udokotela wami uSam Manthata nongqongqoshe wezempilo waseLimpopo bangiyalele ukuba ngihlale egunjini lami ngedwa amasonto amabili ngingahlangani nabantu.
“Njengoba kuthiwa ngiyalulama kufanele ngiye kohlola futhi ukuqinisekisa ukuthi kalisekho leli gciwane emzimbeni wami.
“Bekunzima kakhulu ngingakwazi ngisho ukwenzani. Bengingakwazi ngisho ukuhlangana nendodakazi yami eneminyaka emithathu ubudala. Ngicela umphakathi waseNingizimu Afrika ukuba uyilandele imithetho ebekwe nguMengameli wezwe uCyril Ramaphosa wokuba sihlale ezindlini singabi wuvanzi.
“Kubalulekile ukuthi sigeze izandla. Ngokwenza njalo singalinqoba leli gciwane ngoba uma abantu behleli ezindlini ngeke balithole kalula kanti uma behamba yilapho bezolithola kalula.
“Lo mkhuhlane kawukhethi ukuthi umdala noma umncane, uyakholwa noma awukholwa, uphila kahle noma uyahlupheka. Abantu abahloniphe bahlale ezindlini kuze kutholakale ikhambi,” kusho uCecilia.
Kuthiwa emhlabeni sebenga-phezu kwesigidi abantu abanaleli gciwane kanti bangaphezu kuka-65 000 asebefile.
Kushaye isikhathi sokushicilela izolo eNingizimu Afrika sebewu-9 abantu asebedlulile emhlabeni bebulawa yilolu bhubhane kanti bangaphezulu kuka-1500 okuthiwa banalo kuleli.
Previous articleAbagijimi bakhala ngesenzo sabahleli be-comrades
Next articlekuboshwe umsubathi nge-corona